Politikan'ny Cookies ▷ ➡️ mpanaraka ▷ ➡️
Ny mpampiasa dia afaka mijery ny karazana cookies ampiasain'ny Google, Google+ Cookie ary Google Maps, araka ny fepetra voalaza ao amin'ny pejiny momba ny inona karazana mofera nampiasaina.
Double cookies dia tsy misy fampahalalana azo fantarina manokana. Indraindray, ny mofomamy dia misy fampahafantarana fanampiny mitovy amin'ny fisehon'ny karapanondro cookie. Ity identification ity dia ampiasaina hamaritana fampielezana dokam-barotra iray izay naseho ny mpampiasa iray teo aloha; Na izany aza, ny DoubleClick dia tsy mitahiry karazan-dahatsoratra hafa ao anaty mofomamy ary, ankoatr'izany, ny fampahalalana dia tsy fantatra manokana.
Ireo cookies ireo dia tsy mitatitra tombony ho an'ny tompon'andraikitra amin'ity tranonkala ity. Automattic, Inc., dia mampiasa cookies hafa ihany koa mba hanampiana hamantatra sy hanarahana ireo mpitsidika ny tranokala WordPress, hahafantarana ny fomba fampiasan'izy ireo ny tranokala Automattic, ary koa ny safidiny fidirana amin'izany, toy ny Tafiditra ao amin'ny faritra "Cookies" ao amin'ny politikany manokana izany.
Tompony: Sessionmtsnb_referrer mtsnb_seen_2923
Tapitra izy ireo amin'ny faran'ny fivoriana. Notehirizin'izy ireo ny mombamomba ny mpampiasa sy ny fotoam-pianarany hanatsarana ny traikefan'ny mpampiasa.
Andro 30 Ity mofomamy ity dia ampiasaina amin'ny fiverenana any amin'ny vinavina, ny optimization, ny tatitra ary ny fanomezan'ny dokambarotra amin'ny Internet. DoubleClick dia mandefa mofomamy any amin'ny navigateur aorian'ny fanontana rehetra, kitiho na hetsika hafa izay mitaky antso amin'ny mpizara DoubleClick. Raha manaiky ny mofomamy ny browser, dia voatahiry ao aminy. Fampahalalana misimisy kokoa
info (at) followers.online dia manome ho an'ny mpampiasa izay te hisoroka ny fametrahana ny cookies voalaza etsy ambony, rohy natolotry ny mpitety tranonkala izay noheverina ho betsaka kokoa ny fampiasana azy:
Farany farany tamin'ny 18/04/2016 ny politika Cookies